Myanmar News | Latest Myanmar News | Myanmar Classified Ads
Home » Private: Myanmar News
Comments Off on သေကံမရောက် သက်မပျောက်
admin | Blog Post, News | November 28, 2014
ကံဆိုးမသွားရာ မိုးလိုက်လို့ရွာ ဆိုသလို၊ သေနေ့မစေ့သေးရင် ပါလာတဲ့ ကံကြွေးကိုတော့ ဆပ်ရတာပါပဲ။ ခွေးကိုက်ခံရမယ့်သူဟာ သျှောင်ထုံးလေးနဲ့ဆိုသလို ကံအကြောင်းပါလာရင် ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။
တရုတ်ပြည် ကွန်ရှမ်းပြည်နယ်မှာ လတ်တလော ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ရပ်ပါ။ လူတစ်ယောက် ကားလမ်းဖြတ်ကူးရင်း ကားတိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်က ဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုရင် ကားတစ်စီးတည်းက တိုက်တာမဟုတ်ဘဲ ကားသုံးစီးနဲ့သုံးကြိမ်သုံးခါ တိုက်တာခံရခြင်းပါ။ ခြေထောက်က
Comments Off on နွယ်ရှင်
admin | News | October 4, 2014
Post by ကောင်းထက်.
Comments Off on အော်.. ကလေးတွေ …တတ်တာက …
အော်.. ကလေးတွေ …တတ်တာက …
Anton Kathrein Jnr
Comments Off on iPhone6plus ကွေးသွားပြီတဲ့
admin | News | September 25, 2014
Comments Off on လေးဆူဓါတ်ပုံ ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီးအကြောင်း
လေးဆူဓါတ်ပုံ ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီးအကြောင်း
admin | News | June 10, 2014
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားရာ နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ထေဝါဗုဒ္ဓဘာသာများ ဖြစ်ကြသဖြင့် ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသူများလဲ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရွှေတိဂုံဘုရားသည် တန်းခိုးအကြီးဆုံး ဘုရားတစ်ဆူအဖြစ် ကျော်ကြားလျက်ရှိသည်။ ရွှေတိဂုံဘုရား၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော သမိုင်းများမှာလည်း ယခုတိုင် မရိုးလှအောင်နားဆင်ချင်လျက်ရှိနေပါသည်။
ရွှေတိဂုံဘုရားသည် နှစ်ပေါင်း၂၆၀၀ ကျော်လောက်တည်ရှိလျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာပြည်နှင့် ကမ္ဘာအတွင်း နှစ်ပေါင်းအကြာဆုံး သမိုင်းဝင်ဘုရားလဲဖြစ်ပါသည်။ စေတီတော်၏ ဉာဏ်တော်မှာ ၃၂၅ပေ/ ၉၉ မီတာ ရှိပါသည်။ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို ကန်တော်ကြီးပန်းခြံ အနောက်ဘက် သိဣၤတရတောင်ပေါ်တွင် တည်ထားကိုးကွယ်ထားပါသည်။ ရွှေတိဂုံဘုရားသည် ဘုရားလေးဆူ၏ ဓာတ်တော်များကို ဌာပနာထားတည်ထားကိုးကွယ်ထားပါသည်။ ကဣသန်မြတ်စွာဘုရား၏ တောင်ဝှေးတော်၊ ဂေါနဂုဏ်မြတ်စွာဘုရား၏ ရေစစ်တော်၊ က္ကသပ္ပမြတ်စွာဘုရား၏ သင်္ဃန်းတော်၊ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား၏ ဆံတော်များဌာပနာ ထားတည်ထားသော စေတီတော် ဖြစ်ပါသည်။ သမိုင်းအထောက်အထားများအရ ကုန်သည်ညီနောင် နှစ်ပါးသည် ကုန်သည်ထွက်ရင်း ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်မှ ဆံတော်များချီးမြှင့်ခံရပါသည်။ ဥက္ကလာပမင်း အုပ်စိုးစဉ် ကာလ ဖြစ်သဖြင့် မင်းဥက္ကလာပသည် ဘုရားတည်ထား ကိုးကွယ်ထားရှိရန် သိဣၤတရတောင်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ကုန်သည်ညီနောင်နှစ်ပါးနှင့်
Comments Off on ဘိုထိုင်အိမ်သာ ဘာ့ကြောင့်သုံးသင့်လဲ……?
admin | News | May 20, 2014
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြန်မာအခေါ် ဗမာထိုင်၊ ဆောင့်ကြောင့် (Squat Toilt) တွေအသုံးများပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်က ဘိုထိုင် (Sit Toilet) တွေထက်အများကြီးသက်သာတယ်ဆိုပေမဲ့ ရေရှည်မိသားစုကျန်းမာရေးအတွက် စဉ်းစားရင် ဘိုထိုင်အိမ်သာတွေသာ သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။
၁) ကျန်းမာရေးရှုထောင့်မှကြည့်ရင် ဗမာထိုင်အိမ်သာဟာ အူလမ်းကြောင်းကွေးကောက်နေတဲ့အတွက် လမ်းကြောင်းမဖြောင့်ပါဘူး (မှတ်ချက်။ အကျင့်ဖြစ်နေ၍ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်မှအားရသူများကို မရည်ရွယ်ပါ) 😀 ဒါပေမဲ့ ကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုတာ မွေးယူလို့ရပါတယ်။
၂) ရေချိန် Level အရ နိမ့်တဲ့အတွက် အနံ့အသက်ဆိုးတွေနဲ့၊ အပေါ့သွားရင်တောင်
Comments Off on အာရုံငါးပါး နဲ့နည်းပညာ
admin | News | April 27, 2014
Oculus Rift လို့ခေါ်တဲ့ Virtual World ထဲအကြားနဲ့အမြင်ကိုလှည့်စားနိုင်တဲ့ 3D Gaming Headset ဂိမ်းဆော့တဲ့မျက်မှန်ဟာ နှလုံးရောဂါရှိတဲ့သူတွေအတွက်တော့ အင်မတန်အန္တရာယ်များလှပါတယ်။
ရုရှားနိုင်ငံ Shopping Mall တစ်ခုမှာ
Comments Off on ထူးဆန္းတဲ့ အက်ီ
admin | News | April 3, 2014
ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အကၤ်ီေလးေတြကိုု စက်င္ေက်ာက္ (Carrera Marble) နဲ႔ ထြင္းထုုထားတာပါတဲ့…။ ထုုဆစ္ခဲ့တဲ့ပညာရွင္ကေတာ့ Edinburgh ျမိဳ႕ စေကာ့တလန္လူမ်ိုုး Alasdair Thomson ျဖစ္ပါတယ္…။ သူဟာ
အများနဲ.သက်ဆိုင်တဲ.ပန်းခြံထဲကရေကန်ကို ဒီလိုလုပ်တာ လုံးဝမကောင်းပါဘူး။ သူတို.ကအရောင်ဆိုးဆေး chemical တွေခတ်သွားခဲ.တာပါ။ဒီ ရေတွေကိုပြန်ပြီးလဲလှယ်မယ်ဆိုရင်
Comments Off on ေနရာ Tracking လိုက္လို ့ရႏိုင္တဲ့ hereO GPS နာရီေလး
ေနရာ Tracking လိုက္လို ့ရႏိုင္တဲ့ hereO GPS နာရီေလး
admin | News | March 15, 2014
ကိုယ့္ရဲ ့ရင္ေသြးငယ္ေလးေတြ အျပင္မွာ ေလွ်ာက္ေဆာ့ေနတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္
အိမ္လည္ေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္ မိဘေတြအေနနဲ့စိတ္ပူၾကေပမယ့္ ဘယ္သူကမွ မ်က္ေစ့
ေဒါက္ေထာက္ကာ ၾကည့္ရွဴေနႏိုင္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္
စိတ္ေအးေအးထားၾကပါ။ ေနာက္ဆံုးေပၚ GPS Tracking
Comments Off on SEO ဆိုတာ…
admin | News | February 22, 2014
SEO ရဲ့အရွည္ေခါက္ကေတာ့ Search Engine Optimization ပါ။
အရိုးရွင္းဆံုး ဖြင့္ဆိုရရင္ေတာ့ဝက္(ဘ္)ဆိုက္တစ္ခုရဲ့ Business Nature နဲ့ Functionality ကို Search Engine က အျပည့္အဝနားလည္ၿပီး လူေတြရဲ့ရွာေဖြမွဳရလာဒ္စာမ်က္ႏွာဆီသို့ သဘာဝအတိုင္းတြန္းပို ့ေပးျခင္း Process ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာ .. သင့္ရဲ့ဝက္(ဘ္)ဆိုက္က အဝတ္အထည္ေတြကိုအြန္လိုင္းမွာေရာင္းတဲ့ Online Fashion Store ဆိုၾကပါစို ့။ လူေတြက Google မွာ “fashion clothing” (သို ့) “ဖက္ရွင္အဝတ္အထည္” လို့ရိုက္ထည့္ရွာလိုက္တဲ့အခါမွာ
Comments Off on အဆင့္ျမင့္ Marketer ေတြရဲ့လက္စြဲ SEO-Search Engine Optimization
အဆင့္ျမင့္ Marketer ေတြရဲ့လက္စြဲ SEO-Search Engine Optimization
admin | News | January 28, 2014
SEO လိုု့ေျပာရင္ က်ေနာ္တိုု့ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြက္စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ့ေတြအတြက္ေတာ့ နဲနဲစိမ္းေနပါဦးမယ္။ အေၾကာင္းမွာ SEO လို့ေခၚတဲ့ Search Engine Optimization ဟာ အင္တာနက္တိုးတက္သံုးစြဲသူဦးေရနဲ့ တုိက္ရိုက္အခ်ိဳးညီလို့ပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူဦးေရနည္းေသးေတာ့ အခ်ိဳ ့ေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဒီေနရာမွာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖို့ ေစာေနေသးတယ္လို့ယူဆၾကပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ့လုပ္ငန္းအေနအထားရဲ့ Performance အရ ေစာတယ္၊ေနာက္က်တယ္လို ့အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြရွိၾကေပမဲ့၊ Internet Marketing ရဲ့
" Sigmo " Bluetooth Device
by kwxnmn on August 16, 2013 -0Comments
ဘာသာစကား မတူညီတဲ့ လူမ်ိဳးေတြရဲ. စကားကို တုိက္ရိုက္ အခ်ိန္နဲ. တေျပးညီ ဘာသာျပန္ေပးမယ့္ " Sigmo " Bluetooth Device Smart Phone အသံုးၿပဳသူေတြအတြက္ ဘာသာစကား မ...